မြစ်ကြီးနား ရေနစ်မြုပ်မှု စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြစ်ကြီးနား ရေနစ်မြုပ်မှု စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေရှိ
Posted by kalink on Jun 26, 2012 in Copy/Paste, News | 10 comments
မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်း အနောက်ဘက် ဆိုင်တဆိုင် ရေမြုပ်နေပုံကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – EVB facebook မှ)
လတ်တလောတွင် ရေနစ်မြုပ်နေသည့် ရပ်ကွက်များတွင် လျှပ်စစ်မီးများ ဖြတ်ထားကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများကိုလည်း ယာယီ ပိတ်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ရေထပ်ကြီးလာရင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ ဘာတွေ လုပ်ဖို့တော့ အစီအစဉ် ရှိတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့၊ ဘာသာရေးကျောင်း တို့မှာ နေထိုင်လို့ ရအောင် စီစဉ်ထားတယ်” ဟု ဦးဆန်းအောင်က ဆက်ပြောသည်။
ဒေသခံများ အနေနှင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားသည့် အစားအသောက်များကို စားသုံး နေကြရကြောင်း၊ ရေ ဆက်လက် ကြီးလာပါ က အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
မေခ နှင့် မလိခ မြစ်ဆုံ အထက်ဘက်တွင် ပြီးခဲ့သည့် တပတ်ခန့်က မိုးအဆက်အပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် မြစ်ရေလျှံ၍ ရေကြီးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုလဆန်းပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ကျောက်စိမ်းတွင်း တူးဖေါ်ရာမှ ထွက်ရှိသော မြေစာပုံများ ပြိုကျသဖြင့် ကျောက်စိမ်းတွင်း တူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်များ အနီးရှိ မော်မောင်းလယန် ကျေးရွာမှ အိမ်ခြေ ၇ လုံးနှင့် ဗလခ ကျေးရွာရှိ နေအိမ် ၁၂ လုံး ရေထဲမျောပါ ပျက်စီးသွားသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်များကြောင့် လူအသေအပျောက် မရှိသော်လည်း အိမ်နှင့် အိမ်တွင်း ပစ္စည်းများ၊ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များ သယ်ဆောင် ချိန်မရလိုက်၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အင်း…. အန်ဒရယ်တွေထဲမှာ သဘာဝ ဘေးအန်ဒရယ်က လဲ တယ်ဆိုးသကိုးးး…..
မြစ်ရေတည်ငြိမ်ပြီး အခြေအနေမွန်မှု့များ လျှင်မြန်စွာ ရနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
လူပြိန်းကြည့်နည်းနဲ့ကြည့်ရင်ကို.. ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ဖို့.. မြစ်ဆုံအပါအ၀င်.. ဧရာဝတီမြစ်ကြောတလျှောက်.. လူလုပ်ရေကာတာတွေ ဆောက်ဖို့လိုနေပြီထင်မိတယ်..
ဧရာဝတီရဲ့..ရေဝေရေလဲတောတွေပျက်သုန်းနေပြီး.. ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောက.. ရေခဲတွေလည်း.. ကမ္ဘာနွေးလာတာနဲ့အမျှ.. အရေပျော်ကျပြီး.. ကြာရင်ကုန်မှာပဲ..
သဘာဝအတိုင်းဆိုပြီး.. တမြေ့မြေ့နဲ့သေဆုံးသွားတာကို.. ထိုင်ကြည့်မလား.. လူ့စွမ်းအားနဲ့..တတ်နိုင်သလောက်ကယ်တင်မလား.. ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ပဲ..
အစွဲတွေဖယ်ပြီး.. လက်တွေ့ကျကျ.. မျက်စိဖွင့်ကြည့်ကြဖို့..လိုပြီထင်မိတယ်..။
အောက်မှာ..ကမ္ဘာနွေးလာလို့.. အာတိတ်စက်ဝိုင်းဖက်က..ရေခဲတွေပျော်ကျလာလို့.. ပင်လယ်ရေမြင့်လာတဲ့အကြောင်းသတင်း.. ဒီနေ့ပဲတက်လာတာ.. ကူးတင်ပေးထားတယ်..
ကယ်လီဖိုးနီးယားမြင်တယ်ဆိုလို့.. မြန်မာပြည်လွတ်တယ်တော့မထင်နဲ့.. ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေပြင်ကဆက်နေတာ… အကုန်တက်လာမှာပဲ..
California sea levels to rise 5-plus feet this century, study says
By Tony Barboza / Los Angeles Times (MCT)
Monday, June 25, 2012 – Added 19 hours ago
LOS ANGELES — Sea levels along the California coast are expected to rise up to 1 foot in 20 years,2feet by 2050 and as much as5½ feet by the end of the century, climbing slightly more than the global average and increasing the risk of flooding and storm damage,anew study says.
That’s because much of California is sinking, extending the reach ofasea that is warming and expanding because of climate change, according toareport byacommittee of scientists released Friday by the National Research Council.
In Washington and Oregon, where geological processes are flexing the land upward, researchers predictaless dramatic sea level rise that will register below the global average.
အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ၊ စိတ်ချရမှု ရှိမယ့် အာမခံနိုင်မယ့် ရေကာတာမျိုး ကို တာဝန်ယူမှု အပြည့်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ရှိပြီးသား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကသာ လာဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ၊ မြန်မာနိုင်သူားတွေ ဒီလောက် ခါးသီးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူကြီးရေ မြစ်တစ်စင်းကိုစွမ်းအင်ထုတ်ဖို့ ကို အခြေတည်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအကြောင်း ရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြုံး ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီ။ ဂန္ထ၀င် စာအုပ်ကောင်းတစ် အုပ်ပါပဲ။ လူတွေရဲ့ အရိုးထဲထိ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး စသည်တို့ကို သိပ်ပံပညာနဲ့ အရင်းရှင်စနစ်က ထိုးခွဲခြေမွ နိုင်ခဲ့ပုံကို ဖတ်ရရင် မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ရှုထောင့်တစ်မျိုးက မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ် ထုတ်ဝေဖို့ တစ်နေလို့ရှင်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ပါပဲ။ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့စာအုပ် တချို့ ပြုံး ပြန်ထားတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အယ် ..အဲလောက်ကြီးတောင်တတ်တာလားး…စိုးရိမ်းစရာပဲနော် …
ဒါတောင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပျက်သွားလို့ အဲဒါသာဆက်လုပ်နေရင်ဒီထက်ဆိုးမယ်ထင်တယ်
ရေ ကာ တာ ဆို တာ မြစ် ချောင်း တွေ ရဲ့ ရေ အ တိုး အ လျှော့ ကို ထိမ်း သိမ်း ဖို့ ဆောက် ချင်း ဖြစ် ပြီး ၏ ။ ၎င်း ရေ ကာ တာ သည် မြစ် ရေ လျှံ ခြင်း ကို ကာ ကွယ် ပေး နိုင် ပါ သည် ။
ရေ အား လျှပ် စစ် က တော့ ရေ ကာ တာ ရဲ့ ဘေး ထွက် ပစ္စည်း ဖြစ် ပါ သည် ။
အင် တလောကထိမငြိမ်မသက်သေးတဲ့ ကချင်မှာ ရေကြီးပြန်ပီ။
မြစ်ရေကြီးတာက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိန်းတဲ့သူတွေကို အကူအညီတောင်းရင် ရနိင်မယ်ထင်ပါတယ်…:(